Vaovao Mafana · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Aogositra, 2018
Azia Atsinanana 14 Aogositra 2018
Kenya: Hanohitra Sa Tsy Hanohitra?
Afrika Mainty 14 Aogositra 2018
Voazarazara be loatra avy ao anatiny ny ankamaroan'ny firenena, mba tsy ho lasa loharanonà adintsaina ho an'ny ankamaroan'ireo mpitondra ny fifanarahana fikomiana hanoherana ny governemanta...Hanohitra sa tsy hanohitra? Io no fanontaniana. Tohin'ny andraikitra noraisin'ny media sosialy Twitter tao anatin'ireo fihetsiketsehana toniziana sy ejiptiana, miady hevitra eo amin'ny Twitter ireo keniana ny amin'ny hakàna tahaka an'ireo fihetsiketsehana ireo na tsia. Ireo tenifototra #KenyaFeb28 and #ChoosePeace no fironana eo amin'ny Twitter.
Madagasikara 11 Aogositra 2018
Namely an'i Oman ny rivodoza tropikaly Gonu
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Aogositra 2018
Nanambara ny hamehana ny governemantan'i Oman rehefa namely ny firenena ny rivodoza tropikaly Gonu , izay nahatratra ny sokajy faha 5 amin'ny loza voajanahary. Fantatra fa nanavatsava nanerana ny morontsiraky ny firenena nandritra ny telo andro ity oram-batravatra ity.